အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: စိတ်ကူးယဉ်ဆုတောင်း
Posted by တီချမ်း at 5:33 PM
Rita June 8, 2011 at 8:07 PM
((တလျောက်လုံး လူကလွဲရင် ခွေးတွေကပဲ လူတွေနဲ့ တူတူလမ်းလျောက်ထွက်လေ့ရှိတယ်လို့ ကိုယ်ထင်ထားတာ။ ဒါပေမယ့် ကြောင်ကို ခြင်းနဲ့ ထည့်ပြီး လမ်းလျောက်တဲ့ မိန်းမ တယောက် ကို တွေ့ဘူး တယ်။ ခြင်းထဲက ကြောင်ကတော့ ကြည့်ရတာ စိတ်ပျက်ပြီး ရှက်လဲရှက် နေသလို ပါပဲ။ ကြည့်ရတာ ကြောင်က လျောက်ချင်ပုံလဲ မရပါဘူး။ အင်းလေ သူတို့ ပိုင်ရှင်တွေနဲ့တူတူ လမ်းလျောက်နေတဲ့ ခွေးတွေက သူ့ကို ဟာသ လုပ်မှာစိုးလို့နေမှာပေါ့နော့။ ဘယ်တုံးကများ လူနဲ့ တူတူလမ်းလျောက်တဲ့ ကြောင်ရယ်လို့ ကြားဖူးလို့လဲ…?။))
DL June 8, 2011 at 10:06 PM
(( ကြောင်ကို ခြင်းနဲ့ ထည့်ပြီး လမ်းလျောက်တဲ့ မိန်းမ တယောက် ကို တွေ့ဘူး တယ်။ ခြင်းထဲက ကြောင်ကတော့ ကြည့်ရတာ စိတ်ပျက်ပြီး ရှက်လဲရှက် နေသလို ပါပဲ။ ကြည့်ရတာ ကြောင်က လျောက်ချင်ပုံလဲ မရပါဘူး။ အင်းလေ သူတို့ ပိုင်ရှင်တွေနဲ့တူတူ လမ်းလျောက်နေတဲ့ ခွေးတွေက သူ့ကို ဟာသ လုပ်မှာစိုးလို့နေမှာပေါ့နော့ ))
You can understand Cat language or Mar Da Ga? lol
သက်ပိုင်သူ June 8, 2011 at 10:55 PM
ကိုယ်ကတော့.. ကြောင်နဲ့တော့ လမ်းအတူမလျှောက်ဘူး။။ ရေတော့ အတူတူချိုးတယ်... ကြောင်ကို ဂုတ်ကနေကိုင်ပြီး ရေချိုးပေးပါ.. သူလည်း ရေမွန်း.. ကိုယ့်လက်လဲ သွေးတွေရဲ.. တကယ်ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ လုပ်တာ.. တခါတလေ.. ကြောင်ဝမ်းဆွဲသည်တောင် လုပ်လိုက်သေးတယ်။။ ဟီး။ မဆိုးဘူး.. နောက်တခါ ကြောင်ကို ခြင်းထဲ ထည့်ပြီး လမ်းလျှောက်ရမယ်...
စကားမစပ်.. ကိုယ်လည်း ဆုတောင်းခဲတယ်... ဆုတောင်းပြီးရင် မျော်လင့်ရတာ.. မုန်းလို့
တီချမ်း June 9, 2011 at 1:18 AM
တကိုယ်ကိုယ်နဲ့သူများ ကိုအတုခိုးနေတာပေါ့လေ ခွိ ခွီး.........ကုတ်ထည့်လိုက်မယ်
"လမ်းတလျောက်မှာတော့ ခွေးချီးတွေ တွေ့ရတယ်။ ခွေး ချီးတွေကို ရှောင်ရင်းရှားရင်း လျောက်ရတာလဲ တမျိုးတော့ ပျော်စရာကောင်းတာပါပဲ။"
hahaaa..pretty funny to imagine it. really like ya jolly thinking. lol
အမ် တီချမ်းကလဲ ဘာလို့ဆုတောင်းမပြည့်ရမှာလဲ ပြည့်သားပဲ။
စကားပန်းနဲ့လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုပြီး ပိုစ့် တပုဒ် ရသွားတယ်လေ။
တီချမ်းစာတွေကို ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရေးပါ ရေးချင်တာသာရေး... စိတ်ထဲရှိတာရေး..။
jr June 9, 2011 at 11:54 AM
တီတော့ ကဗျာဆန်နေပါပီ ဆိုပြီး ဖတ်နေတာ .. ကြောင်ကိစ္စရောက်တော့ ရီရရော..
မင်းလူ စာတွေ သတိရတယ်။း))
တီချမ်း June 9, 2011 at 12:35 PM
ဒုက္ခပဲ အဲ့လိုမရည်ရွယ်ရိုး အမှန်ပါ မိုးနတ်မင်းကြီး သိပါတယ်လေ
တီ့စာတွေ ဆို လူတွေ က ကို ရည်ချည်းနေချင်ကြတာကိုး ခက်ပါ့
တီချမ်း June 9, 2011 at 11:24 PM
Nang Nyi likes this.
Nang Nyi ဒါမျိုးကို ကြိုက်ပါသည်
Nang Nyi သို့သော် ဒါမျိုးမရေးနိုင်တော့တာလည်း ကြာပါရောလား
Addy Chen ဒါမျိုးရေးဖို့ ဒါမျိူးတွေ ဘတ်ဖို့ လိုတာပေါ့
Nang Nyi ဒါဖြင့် ဒါမျိုးတွေ များများထပ်ရေးပေါ့
Addy Chen နောက်ဆုံးတော့လဲ ငါပဲ မှားတယ်
Zar Chi Lwin ဖြစ်ရလေတီချမ်းရယ် စကားမစပ် ပရိုဖိုင်ပုံထဲ ချောလိုက်တာ :))
David Aye Myat Godwiller တိုက်ဆိုင်မှုလားတော့မသိဘူး။ ကျုပ်လဲ ရှင့်စာတွေသိပ်တော့ ဖတ်လေ့မရှိဘူး။ သို့သော် ဖတ်လိုက်တိုင်းမောင်မပါတဲ့ ပို့စ်ကို မဖတ်မိဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အင်း မောင့်ကို သတိရလိုက်တာ။ မောင်သုပ်ပေးတဲ့ လက်ဖက်သုပ်က ဒီလိုအရသာ ရှိတာနော်။ But Vit Noom, The way Addy Chen cook pork organs is the best in the world! Am I right Co Co Le? Please confirm. :-)
Addy Chen the student is PERFECT.........
Vista June 10, 2011 at 9:41 AM
ဟင်းတွေပဲချက်ပါ .. ခုတလော ဘာချက်ရမှန်းမသိလို့ ပါဆို တီကလည်း အသစ်မချက်တင်ဘူး ..။
ကြောင်ကို လည်ပတ်တတ်လျှောက်တာကတော့ တွေ့ ဖူးတယ် ကြောင်က ဘဝင်တခွဲသားနဲ့ ကိုလျှောက်နေတာပါ။ လည်ပတ်တည်ကြိုးဆွဲထားလို့ လားတော့မသိဘူး ။
ကြောင်ကို သေချာ ကြောင်ရှမ်ပူနဲ့ ချိုးပေးနေကြပါ ။ တခါမှ အကုတ်မခံရဘူး။ ငယ်ငယ်ထဲက ချိုးကျင့်ရှိရင် ဖြစ်ပါတယ်။
တီချမ်း June 10, 2011 at 10:44 AM
မနေ့ကပဲ သော်တာဆွေ ရဲ့မခင်နှင်းဆီ ပြန်ဘတ်နေတာ ဘတ်ချင်လို့ကို တကူးတက ရန်ကုန်ကနေ ပြန်သယ်လာတာလေ
ပြီးတော့ ကြောင်ကို တက်နင်းမိတဲ့ အခန်းလဲရောက်ရော ရယ်လိုက်ရတာ
ချက်ပါ့မယ် ဗစ် ရယ်
အရင်က ချက်ထားတာထဲက ပုံတင်ပြီးရင် ပိုစ့် တင်ပေးမယ်နော်